नेप्से परिसूचक १५०० बिन्दुमुनि
मंगलबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ४३ अंक घटेको छ । बजार खुलेको केही समयपछि नै ओरालो लागेको नेप्से यस दिन शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत घटेर १ हजार ४ सय ९३ दशमलव ८२ बिन्दुमा पुगेको छ । करिब १ महिनापछि नेप्से १ हजार ५ सय बिन्दुभन्दा तल झरेको हो । यसअघि मंसिर ७ गते नेप्से १ हजार ४ सय ९३ दशमलव २९ बिन्दुमा रहेको थियो । अघिल्ला तीन कारोबार दिनदेखि ओरालो लागेको नेप्से चार दिनमा २६ दशमलव ९२ बिन्दु घटेको छ । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिन थालेपछि बजार प्रभावित भएको हो । हाल बैंकहरूले निक्षेपमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । ब्याजदर बढेपछि बजार घट्ने गर्दछ । सुरक्षित लगानीमा राम्रो मुनाफा पाउने भएपछि लगानीकर्ता त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
यस दिन ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३ दशमलव शून्य ४ अंक घटेर ३ सय १४ दशमलव ७६ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४१ दशमलव ३३ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । नेप्से ओरालो लागे पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको छ । यस दिन १ सय ६६ कम्पनीको ५ हजार १ सय ९२ पटकको कारोबारमा रु. ५९ करोड ९३ लाख ७६ हजार ३ सय २२ (म्यानुअल टर्नओभरसहित) बराबरको १४ लाख ५ हजार ९ सय ७१ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति यस दिन रु. १६ अर्ब ५८ करोड घटेर रु. १७ खर्ब ३७ अर्बमा सीमित भएको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । यस दिन सो कम्पनीको रु. ७ करोड ९४ लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको यस दिन रु. ६ करोड ५ लाखबराबरको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । अरुण फाइनान्सको सेयरमूल्य यस दिन ९ दशमलव ७० प्रतिशत बढेको छ । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयरमूल्य भने यस दिन करिब ६ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ६६ कम्पनीमध्ये २७ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय १५ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २४ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक ३ दशमलव ९६ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी, होटेल समूहको परिसूचक १ दशमलव ५२ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव १ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत घटेको छ । बैंकिङ समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत घटेको छ भने ट्रेडिङ र विकास बैंक समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत घटेको छ ।
प्राविधिक समस्याका कारण बजार प्रभावित
नेप्सेमा दुईजना सिइओ
घट्यो नेप्से, कारोबारमा पनि गिरावट